Wadanka Ingariiska ayaa galaya xaalad cusub oo xanibnaan ah (lockdown). Laga bilaabo caawa qof walbo waxaa la farayaa inuu gurigiisa ku ekaado ama joogo. | Banaadir Times
HomeXulashadaWadanka Ingariiska ayaa galaya xaalad cusub oo xanibnaan ah (lockdown). Laga bilaabo...
Wadanka Ingariiska ayaa galaya xaalad cusub oo xanibnaan ah (lockdown). Laga bilaabo caawa qof walbo waxaa la farayaa inuu gurigiisa ku ekaado ama joogo.
Raysalwasaare Boris Johnson ayaa hadalkan ku dhawaaqay mar uu khudbad u jeedinayay caawa fiidkii shacabka Ingariiska. Wuxuu sheegay in talaabad oo ay dowladiisu qaadeeyso ay jawaab u tahay nooc cusub oo coronavirus ah oo so xowli ah ugu faafayo wadanka Ingariiska oo dhan. Waxaa la sheegayaa in fayruskan Koroonaha ah ee cusub uu ka biloowday gobolka Kent ee dhaca Koonfur-Bari Ingariiska ilaa uu ku London iyo wadanka intiisa kale. Sidaa aawgeed, dowlada waxay ku qasbanaatay inay wax ka qabto halista sii kordheysa ee caafimaadka bulshada.
Ilaa markii uu biloowday, cudurkan wuxuu ku dhacay 2.3 malyan oo qofood (waa 2 malyan iyo 300 oo kun). Waxaana u geeriyooday in ka badan 75 kun oo qofood.
Xaaladaan xanibanka ah (lockdown) waxay soconaysaa ilaa laga gaaro bisha Feberaayo dhexdeeda.
Berito oo ah maalintii ugu horeeysay sanadka cusub ee la bilaabi lahaa iskuulada ayaa waxaa la go’aamiyay in ay iskuulada xirnaadaan oo casharada lagu bixiyo aaladaha ama habka online ka ah. Caruurta dadka haya shaqooyinka muhiimka ah sida dhaqaatiirta, kalkaaliyayaasha, baliiska, shaqaalaha gurmadka degdega iwm oo keliya ayaa loo ogol yahay inay iskuuladooda aadaan. Waxaa kaloo Iyana iskuuladooda ku noqon kara caruurta baahiyaha gaarka qaba.
Meheradaha, dukaamanka , goobaha jimicsiga lootago iyo ganacsiyada badankooda waa la xirayaa. Waxaa furnaan kara oo keliya dukaamanka ama supermarket yada iibiya waxyaalaha muhiimka ah (quutul-daruuriga ah).
Intaa waxaa dheer in la filaya in xaalada ay kasii darto oo dadka koronafayruska uu ku dhacayo ay kor u kacaan usbuucyada soo socda. Dowlada waxay dooneeysaa in ay bisha soo socota siiso adeeg talaal afar qeeybood oo ka mid ah bulshada. Waxaa lagu tala jiraa in la talaalo dadka ku jiro meelaha waayeelada lagu daryeelo, qof walba oo jira 70 sano iyo ka weyn, dhammaan shaqaalaha safka hore ee caafimaadka iyo daryeelka bulshada, dadka
Previous articleDagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & faah faahin laga helayo
Next articleKusimaha Madaxweynaha Galmudug oo farriin u diray laamaha Ammaanka